Prezident Mugaben humna waraanaan to'atamanii jiru. - Gaachana Sabaa
November 15, 2017 November 15, 2017 Gaachana Sabaa
prezidentiin Zimbaabuwee Robert Mugaben waaraana biyyattiitiin eegaa to’atamanii booda bakka tokkotti eegamaa jiru.Robert Mugaben falmii dhaan uummata biyyattii gabrummaa Ingilizii jalaa bara 1980 keessa eegaa bilisoomsanii booda aangoo isaanii boroota 37f tikfatan illee harra garuu angoon isaanii humna waraana biyyattiitiin balaa irra bu’uu hin oolu.
Hoggantoonni waraana biyyattii TV biyyooleessaa eegaa to’atanii booda yakkamtoota biyyattii to’achuudhaaf malee aangoo fudhachuu ykn Mootummaa garagalchuudhaaf miti jechuun haalanii lammiiwwan biyyattiis ta’e qaamni biroo akka tasgabbiin taa’anii fii namni mormii addaatiin dhufe rakkina guddaatu isa muudata jechuun akeekkachiisan.
Pirezident Mugabe fii Warra isaaniif tika addaa akka godhaniif ibsanii kan isaan tarkaanfii kana fudhatan sababa yakkamtoota aangoo qabatanii Pr Mugabe marsanii ta’anii fii rakkoo hawaasummaa akkasumas dinagdee biyyattiin keessa jirtu furuuf jedhanii TV biyyattiitiin dubbatan.
Dubbiin isaanii kunis Mootummaa garagalchuuf fakkeessuu baatan illee garuu galiin isaaniis malaan jaarsa aangoo irraa buusuu ta’uu hin oolu jedhamee shakkama. Afaan laafuun isaanii akka Adduunyaan humnaan Mootummaa garagalchan jechuun isaan hin yakkine yaaduun tahuu mala.Garuu dhugaan jiru Mootummoonni warra dhihaa yoo dhugaa kun Jaarsa aangoo irraa buusuuf tahe gammachuun isaanii hanga hin qabu.
Mugaben qabsaa’oota uummata gurraachaa kanneen kolonii adii dura adda durummaan dhaabbatan keessaa tokkoo fii eegaa bilisummaa gonfatanii tarkaanfiileen isaan abbootii qabeenyaa fii lafaa warra adii irratti fudhatan diinoota baay’ee isaanitti horu illee waggaa 37f aangoo biyyattii to’achuu danda’aniiru.
Turtiin aangoo isaanii fi dhiibbaan mootummaalee dhihaan itti godhamu kunis dinagdee biyyattii kuuffisuun jalala ummanni isaanii dur qabuuf akka gara jibbatti jijjiiramu taasiseera.Mugaabeen imaammata biyyoota dhihaa yeroo baay’ee adda durummaan dura dhaabbachuun jibba hamaa warra dhihaatti of saaxilaniiru.
Kunis qoqqobbii adda addaa biyyattii irratti godhuudhaan aangoo isaanii qormaata keessa galchaa turan.Keesumaahuu Mootummaa Ingilizii waliin baay’ee kan wal jibbanii fii hariiroo baay’ee hamaa ta’e qabaachaa turan.
Wanti nama ajaa’ibu dhiyoo kana itti gaafatamaan WHO Tedros Adhanom pirezident Mugabe akka Ambaasaddara gaarummaa kan Dhaabbata Fayyaa Adduunyaatiif (WHO) filee mootummoonni dhihaa eega itti iyyanii booda deebi’ee irraa buuse of salfachiisuun isaa beekamaa dha.
← Akkaataa interneetii irratti icciitii kee eeggachuu dandeessu.
Ibrahimovic fii Pogban tapha Newcastle waliin tahu irratti nii hirmaatu →